Haiti: Fanehoan-kevitra Tanaty Aterineto Momba Ny Raharaha Duvalier · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2012 13:38 GMT
Tamin'ny faran'ny volana Janoary 2012, ny mpitsara mpanao famotoana mitady vesatra mikasika ny zon'olombelona hanenjehana an'ilay mpanao didy jadona voaongana tany Haiti, Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, dia nanapa-kevitra fa “tapitra ny fe-potoana voafetran'ny lalàna mikasika ireo fanitsakitsahana ny zon'olombelona – tsy izany kosa anefa ny amin'ny fangalàran'i Duvalier ny volam-panjakàna.
Ireo Haitiana, na ny ao amin'ilay nosy na ny any am-pielezana, dia tsy maintsy niatrika ny fanafoanana ireo heloka be vava nataon'ilay mpanao didiy jadona natahorana, ary hiatrika fitsaràna izy noho ny hala-bola izay mety ho sazy malefaka ihany. Amnesty International, izay nitondra porofon'ny fanitsakitsahana zon'olombelona teo ambany fanjakàn'i Jean-Claude Duvalier, dia sosotra mefy tamin'ity didim-pitsaràna ity. Tsy namindra fo ihany koa ireo mpitoraka blaogy.
Tao amin'ny flickr no nahitana ny iray tamin'ireo fanehoan-kevitra nahavariana indrindra momba ny fihetseham-pon'ireo Haitiana manoloana ny raharaha Duvalier, raha tao amin'ny rakitsary mitondra ny lohateny hoe “Manohitra ny valin'ny raharaha Duvalier”, nitatitra an-tsary ny tantara i Etant Dupain – ary nanampy fanampim-panazavàna kely izay manome lanja ny toe-javatra:
Ny Firenena tsy misy Fahamarinana dia Fiara tsy misy Jiro, Haitiana Manohitra ny Valin'ny Raharaha Duvalier
Tamin'ny 7 Febroary 2012, Haitiana am-polony maro no nivory teo anoloan'ny Ministeran'ny Fitsaràna tamin'ny fihetsiketsehana nokarakaraina fikambanam-piarahamonina sivily maro, mba hitakiana fahamarinana amin'ny raharaha Jean-Claude Duvalier. Taorian'ny fanjakàna jadona telopolo taona nataon'ny fianakaviana Duvalier, vanim-potoana nomarihan'ny tsindrihazolena, fanitsakitsahana zon'olombelona, famonoan'olona, fanjavonana ary fanitsakitsahana tanteraka ireo zon'olombelona fototra tany Haiti, nisy fikomiam-bahoaka ka nanery an'i J.C. Duvalier hitsoaka ny firenena tamin'ny 7 Febroary 1987 – 25 taona lasa izay. Tamin'ny herinandro lasa teo dia namoaka didy ny mpitsara iray, ny tsy hanenjika an'i Duvalier amin'ny heloka nataony tamin'ny lafiny maha-olona. Eo andalam-panafoanana izao io didim-pitsaràna io any Haiti ary ambany fanaraha-maso akaiky avy amin'ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona sy ny fiarahamonina iraisam-pirenena.
HAITI Land of Freedom, na HAITI Tanin'ny Fahalalahana dia nandray ity fanapahan-kevitry ny mpitsara ity ho fandàvana an-kitsirano ireo heloka nataon'i Duvalier tamin'ny maha-olona, ary nanamarika fa:
Nitsikera io didim-pitsaràna io ireo vondrona miaro ny zon'olombelona ary nilaza fa tsy rariny ary misy ambadika politika izany.
Nisarika ny saina ihany koa ity mpitoraka blaogy ity fa:
Diso fanantenana ny kaomisera avo momba ny zon'olombelona an'ny Firenena Mikambana, Navi Pillay rehefa naheno ny momba ilay didim-pitsaràna. Nangataka ireo manam-boninahitra Haitiana i Pillay mba hanome antoka fa hohenjehana noho ny heloka iraisam-pirenena ilay mpanao didy jadona teo aloha.
Tsy misy fanafana ny Heloka tamin'ny Ady sy ny Heloka natao tamin'ny maha-olona
Ity tatitra [fr] avy amin'ny Tambajotran'ny Mpanao Gazety any Haiti ity dia nanome hevitra mazava kokoa momba ny akon'ireo heloka ireo teo amin'ny vahoaka Haitiana:
Izahay, niaritra ny didy jadona nataon'i Duvalier, nividy lafo ity zo iraisana ho an'ny fahalalahana maneho hevitra sy hanana fikambanana ity, izay iainanay ankehitriny. Izahay izay, nangina nandritra ny fotoana ela loatra, niezaka nanadino ireo ratra, niray tsikombakomba tsy fidiny tamin'ny tsy rariny, ankehitriny izahay miteny hoe aoka izay […]
Ny fitsaràna an'i Duvalier sy ireo mpiara-miasa taminy noho ny famonoana olona, fampijalinaa ary fitifirana natao fony izy mbola filoha ambonin'ny firenena, an'ny tafika ary an'ireo miaramilany, no hany antoka fa ho fahafahana ny rahampitso ary ho voahajan'ireo milaza fa mitondra anay ny zonay.
Fahamarinana ho an'ireo 30.000 niaritra an'i Duvalier; Tsy maintsy tsaraina izy
Niteraka adihevitra be iny didim-pitsaràna iny, hany ka nisy vondrona Facebook hanaovana dinidinika malalaka [fr] momba izany, antsoina hoe “Justice pour les victimes de Jean Claude Duvalier” (“Fahamarinana ho an'ireo niaritra an'i Jean-Claude Duvalier”). Toeram-piadian-kevitra nafàna ihany koa ny Twitter; ny olona sasany dia nanao “doigt d'honneur virtuel” (ompa atao amin'ny rantsan-tanana) ho an'ilay mpanao didy jadona taloha, ny sasany kosa nanontany tena ny momba ny taham-pandraisana andraikitra any Haiti.
Nahavariana ny bitsika nalefan'i @RPrestonT:
@durandis: Raha ny hevitro, tsy #Duvalier intsony no olana goavana indrindra ho an'ireo Haitiana satria nitovy na mbola loza noho izany no nataon'ireo nandimby azy
Mazava ho azy, naneho ny fomba fijeriny koa ilay mpanao didy jadona taloha, ato.
Ny Fitsaràna dia tsy maintsy misambotra, mitsara ary manameloka an'i Jean Claude Duvalier, Mpanao Heloka Bevava
Tezitra tamin'izany didim-pitsaràna izany [fr] ny mpitoraka blaogy ao any am-pielezana, Elsie :
26 taona katroka izay no nikofohan'ny vahoaka Haitiana irery mba hialàna amin'ny politika mahamenatra, mahery setra ary maharikoriko ataon'ny elatra farany havanana sy ireo mpanohana an'i Duvalier.
Namoaka lahatsary ihany koa izy mampiseho…
miaramila izay midaroka amin'ny tsy antony, vehivavy iray manao akanjo fotsy. Vehivavy tsy manan-tsiny izay sendra nandalo teo fotsiny tamin'iny fotoana iny.
…nahatonga azy nanontany hoe:
Iza no niteny fa tsy hisy vidiny ny heloka?
Elsie koa dia nanoratra lahatsoratra [cr] iray manontany ny fifandraisana eo amin'ny Martelly/Duvalier:
Ireo Haitiana any ivelany, mivonona ho tapaka lalan-drà raha tsy mijery akaiky ny momba ny fiarahan'i “Sweet Mickey” sy Baby Doc…Ndeha hatomboka amin'ny fanontaniana tena hoe tsy i Jean-Claude Duvalier ihany ve no mitondra fa amin'ny alalan'i Sweet Mickey fotsiny.
Haitiana Mpanohitra miteny an'i Martelly: Ajanony ny Fandeferana Mpanao Ratsy aty amin'ny Firenena, Tsy maintsy tsaraina i Duvalier
“Dying in Haiti” [Maty any Haiti] dia namoaka lahatsoratra iray nosoratan'i Amy Wilentz izay mandinika ihany koa ireo fifandraisana ara-politika…
Hatramin'ny niverenany tamin'ny 2011 rehefa nandeha sesitany nandritra ny 25 taona, Atoa. Duvalier — Baby Doc — dia niezaka namerina ny tenany tanaty fiaraha-monina mba mahalala fomba, ary nahazo seza teo akaikin'ny filoha vaovao Michel Martelly mihitsy aza, tao amin'ny lanonana fahatsiarovana ireo niharan'ny horohorontany tamin'ny 2010. Nofenoin'ny filoha tompon'andraikitra mpiara-miasa tamin'ny filoha teo aloha, sy fianakaviany ny fitondràny. Izany hoe mamerina mampiditra an'Atoa. Duvalier izy — ary miaraka aminy, ny fitsipika ivelan'ny lalàna nitantanany sy ny rainy, François Duvalier. Tamin'ny volana lasa teo, nandroso famelan-keloka ho an'i Baby Doc — izay nenjehina noho ny kolikoly sy fanitsakitsahana zon'olombelona — i Atoa. Martelly ary niteny tamin'ny The Associated Press hoe, ‘Mino aho fa mila fifamelan-keloka isika aty Haiti.’
…ary namarana hoe:
Tsy maintsy henjehina Atoa. Duvalier noho ireo heloka nataony tamin'ny maha-olona. Raha foanana izy ireo dia ho famporisihana ho an'ireo mpitondra taloha sy hoavy hanao fanararaotana tahaka izany. Raha tsaraina sy melohina izy, ho fantatr'ireo izay nanantena ny tsy ho voasazy fa ho avy koa ny anjarany hitsaràna azy ireo.
Ao anatin'izao fikorotanana amin'ny sehatry ny fitsaràna izao, zavatra iray no azo antoka: tsy hitsahatra hanaraka akaiky ny fanafoanana io didim-pitsaràna mahabe resaka io ireo bilaogera.
Ireo sary nampiasaina tato anatin'ity lahatsoratra ity dia avy amin'i Gaetantguevara, nahazoana alalana ny fampiasana azy. Tsidiho ny raki-tsary Flickr an'i Gaetantguevara.
Nandray anjara tamin'ny fanoratana ity lahatsoratra ity i Line Lerus.